Paleozoic: sifooyinka, juqraafiga, cimilada, dhirta iyo xayawaanka | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 24/09/2021 10:10 | Geology
Waqtiga juqraafiga gudahiisa waxaan ku kala sooci karnaa xilliyo, xilliyo iyo xilliyo kala duwan oo waqtiga loo qaybshay sida ay u kala horeeyaan juqraafi ahaan, cimilada iyo kala duwanaanshaha noolaha. Mid ka mid ah saddexda marxaladood ee loo qaybiyay farta Phanerozoic waa Paleozoic. Waa wakhti kala guur ah oo calaamad u ah isbeddellada u dhexeeya nooleyaashii hore ilaa noolaha ugu horumarsan ee awood u leh inay qabsadaan deegaannada dhulka.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa dhammaan astaamaha, juqraafiga, cimilada, ubaxa iyo faleebada Paleozoic.
2 Geology -ga Paleozoic
4 Kala duwanaanshaha noolaha ee Paleozoic
Nafleyda badan waxay soo mareen isbadallo taxane ah oo u saamaxaya inay la qabsadaan bay'ada dhulka, tan ugu muhiimsanina waxay tahay horumarinta ukunta amniotic. Laga soo bilaabo aragtida geology, bayoolaji iyo cimilada, Paleozoic waa shaki la'aan muddo isbeddel weyn oo dhulka ah. Muddadii ay socotay, isbeddellada ayaa midba midka kale u dhacay, kuwaas oo qaarkood si fiican loo diiwaangeliyey, halka kuwo kalena aan sidaa u badnayn.
Paleozoic -ku wuxuu socday qiyaastii 541 milyan oo sano ka hor ilaa qiyaastii 252 milyan oo sano. Waxay socotay qiyaastii 290 milyan oo sano.Xilligan, qaababka nolosha badan ee badda iyo dhulku waxay muujiyeen kala -duwanaansho weyn. Waxay ahayd mid ka mid ah waqtiyadii ay nooluhu aad u kala duwanaayeen, oo si gaar ah u taqasusay, oo xitaa awood u lahaa inay ka tagaan deegaannada badda oo ay qabsadaan dhulka.
Dhamaadka xilligan, waxaa la sameeyay dhul -weyne oo la odhan jiray Pangea oo markii dambe u kala qaybsamay qaaradda maanta la yaqaan. Inta lagu jiro Paleozoic, heerkulka cimiladu aad buu isu bedbeddelayay. In muddo ah ayay kulayl iyo qoyaan ku jirtaa, halka kuwa kalena si weyn hoos loogu dhigo. Si aad u badan oo ay jireen dhowr baraf -baraf. Sidoo kale, dhammaadka xilligan, xaaladaha deegaanku aad bay u xumaadeen oo waxaa dhacday dhacdo baaxad weyn oo loo yaqaanno dabar-goyn ballaaran, taas oo qiyaastii 95% noocyadii dhulka ku noolaa la waayay.
Geology -ga Paleozoic
Marka laga eego dhinaca juqraafiga, Paleozoic wax badan baa iska beddelay. Dhacdadii ugu horraysay ee ugu weynayd ee juqraafiga muddadan waxay ahayd kala -soocidda dhul -weynaha loo yaqaan Pangea 1. Pangea 1 wuxuu u qaybsan yahay dhowr qaaradood, taasoo siinaysa muuqaalka jasiirad ay ku hareereysan yihiin bad -gacmeedyo. Jasiiradahaasi waa kuwan soo socda: Laurentia, Gondwana iyo Koonfurta Ameerika.
In kasta oo kala -soociddan, intay socotey kumanaan sano ayay jasiiraduhu aad isugu soo dhowaadeen aakhirkiina samaysteen heer sare oo cusub: Pangea II. Sidoo kale, waqtigan laba dhacdo oo aad u muhiim ah oo juquraafi ayaa u dhacay gargaarka dhulka: Caledonia orogeny iyo orogeny Hercynian.
Intii lagu jiray 300 milyan oo sano ee Paleozoic -kii, is -beddello juquraafi ah oo isdaba -joog ah ayaa dhacay sababtuna tahay dhul ballaaran oo berigaa jiray. Bilowgii Paleozoic, xaddi badan oo dhulalkan ah ayaa ku yaal meel u dhow dhulbaraha. Laurentia, Badda Baltic iyo Siberia waxay ku kulmaan kulaylaha. Ka dib, Laurentia wuxuu bilaabay inuu u dhaqaaqo waqooyi.
Qiyaastii xilligii Silurian, qaaradda loo yaqaan Badda Baltic waxay ku biirtay Laurentia. Qaaradda halkan lagu sameeyay waxaa la yiraahdaa Laurasia. Ugu dambayntii, qaaraddii sare ee markii dambe ka timid Afrika iyo Koonfurta Ameerika waxay isku dhaceen Laurasia, waxayna samaysatay dhul la yiraahdo Pangea.
Ma jiraan diiwaanno badan oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan sida cimilada Paleozoic ee hore ay tahay inay noqoto. Si kastaba ha ahaatee, khubaradu waxay rumaysan yihiin in bad -weynta awgeed, cimiladu waa inay ahaataa mid dhexdhexaad ah oo badweyn ah. Xilligii Paleozoic -ka Hoose wuxuu ku dhammaaday Waqtigii Barafka, heer -kulka ayaa hoos u dhacay, tiro badan oo nooluhuna way dhinteen. Goor dambe waxay ahayd xilli cimilo deggan, cimiladu waxay ahayd mid kulul oo qoyan, waxaana jiray kaarboon dioxide kaarboon oo laga heli karo jawiga.
Markay dhirtu degto deegaannada dhulka, oksijiinta jawiga ayaa kordha, halka kaarboon laba ogsaydhku hoos u dhaco. Marba marka ka dambaysa, xaaladaha cimiladu way is beddelayaan. Dhamaadkii Permian -ka, xaaladaha cimiladu waxay nolosha ka dhigeen mid aan la sii wadi karin. In kasta oo aan weli la garanayn sababaha isbeddelladaan (waxaa jira dhowr mala -awaal), waxa la og yahay waa in xaaladaha deegaanku is beddeleen oo heerkulku kor u kacay dhawr darajo, taas oo jawiga diirisay.
Kala duwanaanshaha noolaha ee Paleozoic
Paleozoic-ka, dhirtii ugu horraysay ama noolaha u eg dhirta waxay ahaayeen algae iyo fangaska, kuwaas oo ka samaysmay deegaannada biyaha. Mar dambe, marxaladda xigta ee qaybinta muddada, waxaa markhaati u ah in dhirtii ugu horeysay ee cagaaran ayaa bilaabatay inay soo baxdo, sababtuna tahay maadada chlorophyll, kaas oo bilaabay geeddi -socodka photosynthesis, kaas oo inta badan mas'uul ka ah waxa ku jira oksijiinta ee ku jira jawiga Dhulka. Dhirtaasi waa kuwo aad u qadiimi ah mana haystaan ​​weelal tabiya, sidaa darteed waa inay ku yaalliin meelo leh qoyaan badan.
Goor dambe ayaa waxaa soo baxay dhirbaaxadii ugu horreysay. Dhirtaasi waxay ka kooban yihiin xididdada dhiigga (xylem iyo phloem) oo nuuga nafaqooyinka oo biyaha ku wareejiya xididada. Dabadeed, dhirtu way ballaadhatay oo aad bay u sii kala duwanaysay. Ferns, geedo la beero iyo geedaha waaweyn ee ugu horreeya ayaa soo muuqday, kuwa iska leh Archeopteryx waxay heleen sumcad weyn maxaa yeelay waxay ahaayeen geedaha dhabta ah ee ugu horreeya ee soo muuqda. Mosses -kii ugu horreeyay ayaa sidoo kale ka muuqday xilligii Paleozoic.
Kala duwanaanshahan weyn ee dhirtu wuxuu jiray ilaa dhammaadkii Permian, markii waxa loogu yeero "geeri weyn" ay dhacday, markii ku dhowaad dhammaan noocyada dhirta ee dhulka degganaa ay dhammaadeen.
Wixii noolaha ah, xilligii Paleozoic sidoo kale waa xilli isbeddel ah, maxaa yeelay lixda qaybood ee ka kooban xilligan, xayawaanku way kala duwan yihiin oo is -beddelayaan, laga soo bilaabo nooleyaasha yaryar ilaa xamaaratada waaweyn, iyagoo bilaabaya inay xukumaan deegaanka deegaanka.
Horaantii Paleozoic, xayawaankii ugu horreeyay ee la arkay waxay ahaayeen waxa loogu yeero trilobites, xoogaa laf-dhabarta, mollusks, iyo chordates. Waxaa sidoo kale jira isbuunyo iyo brachiopods. Mar dambe, kooxaha xayawaanku waxay noqdeen kuwo kala duwan. Tusaale ahaan, cephalopods qolof leh, bivalves (xayawaan laba qolof leh) iyo dhuxul ayaa soo muuqday. Sidoo kale, waqtigan, wakiillada ugu horreeya ee Echinoderm phylum ayaa soo muuqday.
Intii lagu gudajiray xilligii Silurian, kalluunkii ugu horreeyay ayaa soo muuqday. Wakiillada kooxdani waa kalluun daan iyo kalluun aan daan lahayn. Sidoo kale, muunado ka tirsan kooxda myriapods ayaa soo muuqday.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto Paleozoic iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Paleozoic